About us MM – KuMel
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းသည် ကွန်ရက်အခြေပြုအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး Khiri Travel Myanmar ၏၀န်ထမ်းများမှ ၂၀၂၀ ဧပြီလ၊ ကိုဗစ်-နိုင်တင်း ကူးစက်ရောဂါကာလ အတွင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများခေတ္တ ရပ်တန့်နေချိန်တွင် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းများစွာအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံမှ လိုအပ်သော လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု အကူအညီများရယူနိုင်စေရန် ရေရှည်တည်တံ့စေမည့် လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံ တစ်ခုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်နေသော စေတနာ့၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းကို နေ့စဥ်ဖေါ်ပြပေးနိုင်ခြင်း။
လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စေတနာ့၀န်ထမ်းများကြား ကြားခံအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ထိရောက်စွာချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
စေတနာ့၀န်ထမ်းလစ်လပ်နေရာများအတွက် တစ်နေရာထဲတွင် လွယ်ကူစွာလျှောက်လွှာတင်နိုင်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက် လှုပ်ရှားမှုများကို လူမှုမီဒီယာတွင်ဖော်ပြပေးခြင်း။
“ကူမယ်”မှ ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ပုဂံခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်အဖွဲ့အစည်း (BTGA) အတွက် စေတနာ့၀န်ထမ်းများရှာဖွေပေးနေပါတယ်။
၀န်ထမ်းမငှားရမ်းနိုင်လို့ သင့်အကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့ တရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးဂေဟာတွေရှိပါတယ်။ သင်ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ အားလပ်ချိန်နဲ့ ခွန်အားများမျှေ၀လိုက်ပါ။
ပုံမှန် ၀င်ငွေမရှိသူများကို အခြေခံအစားအစာများမျှဝေခြင်းနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးမလဲ
KuMel သည် မြန်မာလို “ကူညီမယ်” ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို “We will help” ဖြစ်သည်။
လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်နေသော စေတနာ့၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းကို နေ့စဥ်ဖေါ်ပြပေးနိုင်ခြင်း။လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စေတနာ့၀န်ထမ်းများကြား ထိရောက်စွာချိတ်ဆက်ပေးမည့် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်း။စေတနာ့၀န်ထမ်းလစ်လပ်နေရာများအတွက် တစ်နေရာထဲတွင် လွယ်ကူစွာလျှောက်လွှာတင်နိုင်ခြင်း၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို လူမှုမီဒီယာတွင်ဖော်ပြပေးခြင်း။
စေတနာ့၀န်ထမ်းလိုအပ်နေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီ ထောက်ပံ့ရန်နှင့် လူမှုအကျိုးပြုဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဥ်ရန်။KuMel Volunteer ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ တစ်ဆင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်အကိုင်များကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကို ကောင်းစွာအသိပေးရန်။
မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှသည် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသို့ တိုင် စေတနာ့၀န်ထမ်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ယဥ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမှ နိုင်ငံခြားသားများ၊ ဒေသတွင်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများသည် ကျွန်တော်တို့ကို လူမှုရေး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ရှားမှုများတွင် ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် အရည်အချင်းများအပြင် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုပါ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဒေသခံများ၊ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ဒေသတွင်းခရီးသွား ဖွံ့ဖြိုးရေး အခွင့်အလမ်းများဖော်ဆောင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပါသည်။ Khiri Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသများတွင် ရေရရှိရေးအတွက် စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်း၊ ပလတ်စတစ်လျှော့ချရေးအတွက် ပုဂံပလပ်စတစ် ကမ်ပိန်းတို့ကို ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အတူ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အလှူရှင်များမှ တဆင့် ဒေသခံလူမှုူအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အတွေ့အကြုံများသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုအပ်နေသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များသို့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေပါမည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် ၀က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ၊ လုပ်ကိုင်လိုသော အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်၍ အလုပ်ရှာနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ထိရောက်စွာ အကူအညီပေးနိုင်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်စွတ်ရေးတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လိုအပ်နေသော စေတနာဝန်ထမ်း အရေအတွက် တစ်ဦးချင်းသော်၎င်း သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ အလိုက် သော် ၎င်း Kumel website စာမျက်နှာ ပေါ်တွင်ဖေါ်ြပပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကို တိုက်ရိုက် ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများ (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ရန်ပုံငွေအတွက် ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားလဲ?
လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် အသေးသုံးစရိတ်များနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များ ပေးရန်လိုအပ် ပြီး ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Khiri Reach မှရန်ပုံငွေ ကျပ်ဆယ်သိန်းမတည်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များဖြင့် လည်ပတ်နိုင် ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီ ဖြစ်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ရေရှည်အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်ရန် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လှူဒါန်းငွေများကိုလဲ ကြိုဆိုပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် အချိန်အားဖြင့်မပေးနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည်တော်များထံမှလည်း အလှူငွေများ လက်ခံပါသည်။ လှူဒါန်းငွေများကို Crowdfunding စာမျက်နှာများမှ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ မီဒီယာ စာမျက်နှာများမှ တဆင့်သော် ၎င်း ပြည်တွင်းဘဏ်များ နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောငွေလွှဲ လုပ်ငန်းများမှသော်၎င်း တဆင့် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Eg. +959420 738 934